आइसिटी अवार्ड २०२० को लागि कुन विधामा कसरी दिने आवेदन ? – Padhnekura
सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रतिष्ठित अवार्डको रूपमा चिनिएको आइसिटी अवार्डको पाँचौं संस्करणको अनलाइन नोमिनेशन असार ८, २०७७ देखि सुरु भइसकेको छ । लिभिङ विथ आइसिटीको आयोजना र विभिन्न सरकारी तथा निजी संस्थाहरूको सहकार्यमा आयोजना हुने आइसिटी अवार्ड २०२० को अनलाइन आवेदन साउन १६, २०७७ ( तदनुसार जुलाई ३१, २०२०) गतेसम्म खुल्ला गरिएको छ । यस वर्ष २ नयाँ विधा सहित ११ विधामा आइसिटी अवार्ड २०२० को नोमिनेशन खुल्ला छ ।
अवार्डमा नोमिनेशन तथा आवेदन दिनको लागि आधिकारिक वेबसाइट ictaward.org मा गएर सम्बन्धित विधा (क्याटेगोरी) अनुसार अनलाइन फारम बुझाउनुपर्नेछ ।
१.स्टार्टअप आइसिटी अवार्ड
# यस विधामा बिगत ३ वर्ष (आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ देखि २०७६/०७७) को अवधिमा दर्ता भएका कम्पनीहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् । यो विधामा नोमिनेसन बुझाउन यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।
# २०७६ वैशाखदेखि २०७६ चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक भएका आइटी प्रोडक्टहरूलाई लिएर यस विधामा नोमिनेशन दर्ता गर्न सकिन्छ । यो विधामा नोमिनेसन बुझाउन यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।
राइजिङ स्टुडेन्ट आइसिटी अवार्ड उच्च शिक्षा तथा बिश्वबिध्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको लागि लक्षित अवार्ड हो । यस विधामा विद्यार्थीहरूले बनाएका आइटी प्रोजेक्ट तथा प्रडक्टहरूलाई समावेश गर्न सकिन्छ । यो विधामा नोमिनेसन बुझाउन यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।
४. इन्नोभेसन ड्रिभन क्राइसिस रेसपोन्स आइसिटी अवार्ड
# यस विधामा नोमिनेशन (आबेदन) दिनको लागि माघ २०७६ देखि आबेदनको अन्तिम दिनसम्म सार्वजनिक भएका प्रविधि तथा इन्नोभेसनहरु हुनुपर्नेछ । यो विधामा नोमिनेसन बुझाउन यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।
# यो अवार्डमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विगत १५ वर्षदेखि योगदान दिइरहेका व्यक्तिहरूले आवेदन दिन सक्नेछन् । यस विधामा स्वयम् वा अरू कसैले पनि सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा नोमिनेशन (आबेदन) दिन सकिनेछ । यो विधामा नोमिनेसन बुझाउन यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।
नेपाली मूलका व्यक्ति, जो विदेशमा बसेर पनि देशको सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा दिइरहेको योगदानलाई उच्च कदर गर्दै यो अवार्ड दिइनेछ । यस विधामा विदेशमा रहेर पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रमा योगदान दिइरहेका नेपालीहरूले आबेदन दिन सक्नेछन् । यस विधामा स्वयम् वा अरू कसैले सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा नोमिनेशन(आबेदन) दिन सकिनेछ । यो विधामा नोमिनेसन बुझाउन यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।
# यस विधामा नोमिनेशन दर्ता गर्न सूचना प्रविधिको क्षेत्रको उद्यमीको रुपमा कम्तिमा ५ बर्षदेखि क्रियाशील रहेको हुनुपर्नेछ । यस विधामा स्वयम् वा अरू कसैले सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गरी नोमिनेशन(आवेदन) दिन सकिनेछ । यो विधामा नोमिनेसन बुझाउन यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।
# यस विधामा स्वयम् वा अरू कसैले सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गरी नोमिनेशन(आवेदन) दिन सकिनेछ । यो विधामा नोमिनेसन बुझाउन यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।
९. मिडिया पर्सन आइसिटी अवार्ड
यो अवार्ड सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रलाई मुख्य बिट बनाएर समाचार रिपोर्टिङ, सम्प्रेषण, प्रकाशनमा क्रियाशील पत्रकारलाई दिइनेछ । # कम्तीमा ३ वर्षको अनुभव भएका पत्रकारहरूले यसमा आवेदन दिन सक्नुहुनेछ । यस विधामा स्वयम् वा अरू कसैले सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गरी नोमिनेशन(आवेदन) दिन सकिनेछ । यो विधामा नोमिनेसन बुझाउन यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।
१०. डिजिटल एजुकेशन आइसिटी अवार्ड
# विद्यालय, क्याम्पस लगायतका शैक्षिक संस्थानहरूले यो विधामा आवेदन दिन सक्नेछन् । यस विधामा जो कोहिले सम्पूर्ण जानकारी उल्लेख गरेर नोमिनेशन (आवेदन) फाराम बुझाइदिन सकिन्छ । यो विधामा नोमिनेसन बुझाउन यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।
# नागरिकलाई सेवा दिने सरकारी सस्था, प्राधिकरण, विभाग, स्थानीय निकाय लगायतको प्रतिनिधित्व गर्दै यस विधामा नोमिनेशन दिन सकिन्छ । यो विधामा नोमिनेसन बुझाउन यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।
18th Kimff 2020: CALL FOR ENTRIES
Miss Nepal 2020 deadline extended till July last
Next स्कुल क्याम्पस को लागी खुल्यो प्रबिधि अवार्डको आवेदन